Car hire Gatwick Airport | Cheap Gatwick Airport na-agba ụgbọ ala - Carrentalchoice
Chọọ ụgbọ ala na Gatwick Airport
Ụgbọ njem ụgbọala Gatwick Airport bụ ụzọ dị egwu isi gaa n'ụlọ mgbe ogologo oge ezumike gị gasịrị. Ịkwesighi ichegbu onwe gị banyere ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ ma ọ bụ ịkwado maka njem ụgbọelu. Nwee ụgbọ ala gị na Gatwick Airport dị njikere maka ịbanye na ya.
Na carrentalchoice.com ị na-enwe ike ịchọta ụgbọ ala dị ala karị na-akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ụgbọ ala na-adịghị arụ ọrụ, ụgbọala ndị nwere nnyefe akpaka na akwụkwọ ntuziaka, ndị na-ebu 7 oche na ndị 9 ndị na-ebu oche, na obere ụgbọala ụgbọala. Anyị nwere ihe maka onye ọ bụla.
Ihe kachasị 5 Reason maka Gatwick Car Rental
Nchekwa - Ọ dịghị mkpa ịhapụ ụgbọala gị n'ọdụ ụgbọelu
Akwụ ụgwọ - Ọ bụrụ na ịnwe nnukwu ụgwọ ezinụlọ maka ịkwaga onye ọ bụla site na igafe nke ọha na eze nwere ike ibu ọnụ. Jiri ụgbọ ala ụgbọ ala dị ala na Gatwick Airport nwee ike ịchekwa ego.
Ọnụ ego ụgbọala. Ọ bụrụ na ị ga-anọ oge dị anya mgbe ahụ ị gaghị akwụ ụgwọ ọ bụla na-akwụ ụgwọ
Nchekwa - Zere njem ọha na eze na ụgbọala na-aga na ebe ị na-aga
Ụgbọ Ụgbọ njem - Inwe ụgbọala nke gị na-eme ka ibu ibu dị mfe.
Otu ụzọ ụgbọ ala Gatwick Airport
Nnukwu uru nke otu ugbo ala ụgbọala bụ ihe dị mma. Ịkwesighi ichegbu onwe gị ebe ị ga-ahapụ ụgbọ ala gị, ma ọ bụ usoro ụgbọ njem ị ga-eji banye n'ụlọ, ịbanye ma chụpụ. Ya mere uzo ugbo ala ugbo ala n'ugwu Gatwick bu ihe di nma. Naanị ịhọrọ ebe dị iche iche na-aga ebe ị na-achọgharị.
Banyere Gatwick Airport
Ọ bụrụ na ị nwere oge buru ibu tupu ịpụ, Gatwick Airport nwere ọtụtụ ụlọ ahịa iji nyere gị aka ịdọpụ gị tupu ịbanye ma tupu mgbe ị gafechara nchebe. Na Gatwick, na-atụ anya ka ị hụ ọtụtụ sistem dị n'okporo ámá dị iche iche na-anọchi anya ụlọ ndị ahụ gụnyere HMV, akpụkpọ ụkwụ, Accessorize, Na-esote, Marks na Spencer, Dixons na ụdị boutiques dị ka Lacoste, Fat Face, Hugo Boss, Mango, Ray Ban na ọtụtụ ndị Ọzọ. Kwesịrị ka nke ahụ ghara ịdị mma, Gatwick nwekwara aka ya!
Ụlọ ọrụ bara uru
Bureaux de Change - nke dị na ọtụtụ ihe n'ihu na mgbe nbanye
Ngwa ego nkịtị
Nchekwa akpa akpa
Uwe onyinya, gụnyere ndị ruru eru na nne na nwa
A na - akwụsị n'ụsọ taxi - nke dị site na North na South Terminals
Ihe ndozi ụlọ oriri na ọṅụṅụ
Ndị ọrụ nchịkwa
Ụgbọ mmiri Gatwick nwere plethora nke nri dị iche iche na ụlọ ahịa dị iche iche iji gboo mkpa na mmefu ego niile tupu ị gawa, site na nri ngwa ngwa, na ụlọ nri dị elu. Ndị a gụnyere: Costa Coffee, Cafe Nero, JD Wetherspoon, Burger King, McDonald's, Yo Sushi na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ nri na ịke tupu ịbanye, gaa n'isi ụlọ ọrụ Caviar House & Prunier.
Ịga na Gatwick Airport
Ụgbọ njem na-aga
Ọdụ mmiri Gatwick bụ 28 kilomita n'ebe ndịda London ma chọta ya site na ịpụ M23 na Junction 9. M25 London Orbital motorway bụ nanị minit iri site na ọdụ ụgbọ elu iji gaa njem na ụzọ okporo ụzọ na okporo ụzọ okporo ígwè. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ 'sat-nav' na-abanye iwu ndị na-esonụ iji chọta ọnụahịa kwesịrị ekwesị ị chọrọ:
Ngwurugwu South: RH6 0NP
Ngwurugwu North: RH6 0PJ
Ịga njem site na Train
Ụgbọ mmiri Gatwick bụ nanị 30 nkeji site na Central London site na ụgbọ oloko na-eji ọrụ ụgbọ okporo ígwè Gatwick Express. Ọdụ ụgbọ elu nwekwara njikọ nke ọtụtụ ebe ndị ọzọ na-aga n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè mba Britain.
O doro anya na ọ bụ ụgbọ okporo ígwè kachasị ọsọ na-ebuga gị na etiti London. Ọrụ Gatwick Express na - ewega gị na London Victoria Station na Terminal South na naanị 30 nkeji, na ụgbọ oloko na-apụ na ntụgharị abụọ ọ bụla minit 15. Ikwesiri iru Ugwu North site na ugbo ala, jiri ugbua na-agafe agafe na South Terminal, nke na-ewe nkeji ole na ole. N'oge ederede, otu akwụkwọ ọkọlọtọ ọkọlọtọ na-akwụ ụgwọ na £ 17 na tiketi azụ na £ 29. A pụrụ ịzụta tiketi na ọdụ ụgbọ ala gị ma ọ bụ n'ụgbọ okporo ígwè.
Ọrụ Rail ndị ọzọ
Isi Ntọala Isi
Ebe ha na Njikọ Obodo Mbụ jikọtara ọdụm London na St Pancras na isi obodo nakwa Brighton, Bedford na Luton maka ọrụ na-aga n'ihu n'akụkụ ndị ọzọ nke UK. Ọzọ, ọrụ ndị dị kpọmkwem dị ma ọ bụrụ na ha na-ejegharị na London, na oge njem oge iji tinye 35 nkeji. Ọ bụrụ na ịzụta tiketi gị tupu oge mbụ site na weebụsaịtị First Capital Connect, ị nwere ike ịzụta otu maka ntakịrị ka £ 3 ọ bụla ụzọ.Southern Rail (www.southernrailway.com): Maka ọrụ nkwụsị na mpaghara London site na Croydon.
South Eastern Railways Maka ọrụ Redhill, Tonbridge na Tunbridge Wells.
Obodo Ukwu nke mbu: Maka ọrụ Redhill, Guildford na Ịgụ.
Ụgbọ okporo ígwè mba: Ọrụ na-aga Birmingham. Lelee ebe nrụọrụ weebụ maka ọrụ ejikọta na Scotland na Northern Ireland.
Site na onye nlekọta
Gatwick na-arụ ọrụ nke ọma site na ọtụtụ ndị na-azụ ọrụ na ndị ọrụ ụgbọ elu na-arụ ọrụ ụgbọ elu karịa 400 UK ebe, na ọtụtụ n'ime ha na-eduzi ka ndị ọzọ obodo ukwu. Ọrụ nchịkwa kachasị na-abịa site na Gatwick na South Terminal ma e wezụga Heathrow / Gatwick National Express ọrụ, nke na-ahapụ ndị njem na North Terminal. Ndị nkụzi nke National Express nke London na-aga kpọmkwem na Victoria Coach Terminal na etiti London, yana ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile n'oge awa ọrụ (06.00 - 23.00). Easybus na-enye ụzọ ọzọ dị ọnụ ala karị, ya na ụfọdụ ndị na-azụ ihe dị ka £ 6 kwa onye ọ bụla, na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu si Victoria.
Lee www.gatwickairport.com maka ozi ndị ọzọ dị iche iche na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na / site na ọdụ ụgbọ elu.
Ụlọ ọrụ nlekota nke onwe ya 'Checker Cars' (www.checkercars.co.uk) na-arụ ọrụ dịka onye ọrụ ibe nke Gatwick Airport. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịnye ọnụahịa site na ebe nrụọrụ weebụ ha site na ọdụ ụgbọ elu gị gaa ebe ị chọrọ London. Ha nwere ike ịchọta ụlọ ọrụ ntinye akwụkwọ n'ime ebe obibi North Terminal and the South Terminal entrance building. Njem njem ụgbọ ala nke etiti London na-ewe ihe ruru 65 nkeji na-akwụ ụgwọ gburugburu £ 80 na nke a.
Ọ dị mma ịlele ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọrụ aka na London, ma, ọtụtụ ndị na-enye ọbụna ọnụ ahịa asọmpi karịa, na-anọchite anya ego ka mma.
N'inye ọnụahịa nke njem ikuku n'ime UK, na-efe efe na London bụ mgbe nile nhọrọ na-ewu ewu, karịsịa maka ndị bi n'ebe ugwu nke England, Scotland na Northern Ireland. Ugboro ole na ole na-enye ụgbọ elu ụlọ na Gatwick, ndị a bụ:
British Airways - Si / site na Edinburgh, Glasgow International, Jersey na Manchester.
Easyjet - Iji / site Edinburgh, Glasgow International na Inverness.
Flybe - Site / site na Aberdeen, Belfast City, Guernsey, Inverness, Isle nke Mmadụ, Jersey, Newcastle na Newquay.
Ndị njem na Railcard nwere ikike ịnweta ego maka ọrụ a, ma ha ga-ede akwụkwọ na mpaghara ụlọ ha tupu ha agaa eru.
Naanị: £ 16.90
Laghachite: £ 28.80
Lee weebụsaịtị maka nkọwa zuru ezu, ego efu dabere na ebe ị na-aga / si.
Site / site na etiti London:
Nanị: £ 7.30 ọ bụla
A na-akwụ ụgwọ ụlọ taxi nke dị na Central London ga - efu nke £ 80; Otú ọ dị, ọnụahịa ndị a na-aga n'ihu na-enye ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ime na gburugburu London, n'ihi ya, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịtụle maka ntinye.
Ntuziaka: Buru na mbu site na First Capital Jikọọ na ebe nrụọrụ weebụ maka uzo nke na-amalite dịka £ 3.00 n'ụzọ ọ bụla.
Site na London:
Naanị: £ 12.00
Laghachite: £ 17.00
Gatwick Airport eziokwu
Enweghị ndị njem - 35 Nde kwa afọ
Akwa Igwe - 2nd kasị ọdụ ụgbọelu UK
afọ Open- 1958
5 dabere na 4 votes
Carrentalchoice.com - Ụgbọ ala ụgbọala Gatwick,
Ụgbọ njem ụgbọala Gatwick Airport Review